RIP: An'i Matt | daholo ny data-nao Martech Zone
RIP: An'i Matt ny data-nao rehetra
Alakamisy, Jona 17, 2010 Alakamisy Oktobra Oktobra 29, 2015 Douglas Karr
Namoy olona manokana ny tontolon'ny teknolojia omaly namana Matthew S. Theobald. Matt dia olona mahatalanjona sy marani-tsaina, namolavola sy namolavola fitaovana hanondroana ny angon'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny Internet. Nanoratra momba izany aho Internous taorian'ny fihaonana tamin'i Matt taorian'ny hetsika Smaller Indiana teo an-toerana tamin'ny taon-dasa.
Nanana fahitana i Matt ary nanenjika azy tsy nisy tohiny. Tamin'ny fotoana farany nahitako azy dia nisy setroka nitebiteby teo amin'ny faribolana. Fantatro izy ary nifampiresaka momba ny fahitany izahay, ny fianakaviany, Indianapolis ary nizara tantara adala izahay. Nihomehy be izahay. Ora vitsy taty aoriana dia nitondra azy nody aho ary tsy maintsy nanazava tamin'ny zanako ny antony tara amin'ny 4 ora. Matt dia lehilahy toy izany - nisintona anao fotsiny izy ary tsy afaka tsy nahatsiaro tena ianao fa nahatsapa ho manana namana taloha eo ampitan'ny latabatra aminao.
Malahelo aho maheno ny feon-tsetroka an'i Matt, mikohaka sy mihomehy amin'ny hetsika Smaller Indiana manaraka. Fantatro fa sahirana izy indraindray, irery tamin'ny fahaizany ary tsy nanana mpanohana ifotony hanosehana ny fahitany. Fantatro ihany koa ny fahitany dia lasa zava-misy nefa nolazaiko azy fa isaky ny miresaka izahay. Mety tsy ny laharam-pahamehana amin'ny fikarohana ao amin'ny Internet no misy vokany, fa ny rafitra toa azy amin'ny fikarakarana angon-drakitra manerana ny Internet dia ho tanteraka indray andro any.
Namela hafatra roa ho ahy tao amin'ny Facebook i Matt mba hiaraka hiara-hisakafo atoandro aminy. Be atao loatra anefa aho, ary tsy afaka niaraka mihitsy izahay. Amin'ny Alatsinainy dia hanokana fotoana hanaovana veloma ny namako aho.
Ny fandevenana an'i Matt dia Alatsinainy 6/21, 12PM, Crown Hill Cemetery North Entrance. (Drafitra lanonana Graveside 223)
Tags: intymatt theobald
Mbola mandray tsy fahombiazana ve ny orinasanao S ** t Chicken?
Jun 19, 2010 ao amin'ny 12: 52 PM
Jun 19, 2010 ao amin'ny 3: 41 PM
Izaho sy Matt dia nifanao fotoana hiaraka hisakafo amin'ny alakamisy. Nientanentana tamin'ny bokiko vaovao izy, ary izaho hanome azy ho azy manokana.
Noheveriko fa hafahafa ny tsy nisehoany, raha jerena ny hafanam-pony mahazatra. Fantatro fa tsy maintsy nifamatotra zavatra izy ary hiverina amin'ny herinandro ambony aho.
Miala tsiny fa nifankahita izahay, Mat. Ho avy aho hanao veloma amin'ny Alatsinainy.